डब्ल्यु´एचओको सु´झाव : क्वा´रेन्टाइनमा के खाने, के नखाने ? – Butwal Sandesh
डब्ल्यु´एचओको सु´झाव : क्वा´रेन्टाइनमा के खाने, के नखाने ?
यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै मात्र नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, जसका आधारमा घर भित्र रहेर पनि आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्न सकिनेछ ।यसका साथै यी पौष्टिक आहार सम्बन्धि जानकारीले रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो हुन्छ । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा के–के खाने र कुन– कुन कुराबाट बच्ने भन्ने बारेमा केही जानकारी :
रिफाइन्ड अन्नहरु जस्तै–मैदा, सेतो पास्ता, सेतो चामल र पाउरोटी आदिको सेवन गर्नु हुँदैन । कफी, चिया र क्याफिनेटेड सफ्ट ड्रिङ्क्स, एनर्जी ड्रिङ्क्स, कोल्ड ड्रिङ्क्स अथवा चिनी भएको पेय पदार्थबाट बच्नु पर्छ । नुनको अत्याधिक सेवन गर्नु हुँदैन । विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार एक दिनमा ५ ग्राम भन्दा कम नुन सेवन गर्नु पर्छ । दिनभरीमा चीनीको सेवन पनि कम गर्नु पर्छ । तपाईले दिनभरीमा ६ चम्चासम्म चीनीको सेवन गर्न सक्नु हुन्छ । यदि तपाईंलाई गुलियो खान मन लाग्यो भने गुलिया फलफुल, डेजर्ट अथवा सख्खरको सेवन गर्न सक्नु हुन्छ ।
—खानालाई बाफले पकाउनु पर्छ । —आगोमा ग्रिल गरेर पकाउनु पर्छ । —खानेकुरालाई डीप फ्राई गर्नु भन्दा कम तेलमा तार्नु पर्छ । —खाना बनाउनका लागि अलिभ अयल,सनफ्लावर अयल प्रयोग गर्नु पर्छ ।
—खाना बनाउनु अगाडि हातलाई राम्रोसंग धुनु पर्छ । —खाना बनाउने भाडा र भान्छालाई दिनहु सफा गर्नु पर्छ । —फ्रिजमा मासु, काँचो खानेकुरा र पाकेको खानेकुरालाई भिन्दा–भिन्दै राख्नु पर्छ । —दाल–तरकारीलाई पकाउनु अगाडि राम्ररी सफा गर्नु पर्छ । —फ्रोजन खानेकुरा र पाकेको खानेकुरालाई ५डिग्री सेल्सियस तल राख्नु पर्छ कि भने ६० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथी राख्नु पर्छ ।